पुरानो समाचारसँग नयाँ भेट ः चितवनमा भित्रिएको इन्टरनेट | चितवन पोष्ट दैनिक
पुरानो समाचारसँग नयाँ भेट ः चितवनमा भित्रिएको इन्टरनेट
‘चितवनमा पनि इन्टरनेटको जालो फिंजियो’– दैनिक अखबारका रुपमा प्रकाशनयात्रा आरम्भ गरेको २५औं दिन अर्थात् २०५६ साउन २५ गते चितवन पोष्टमा छापिएको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो । समाचारको आमुखमा मोटो अक्षरले दुई वाक्य लेखिएको थियो, ‘विश्व एक्काइसौं सताब्दी प्रवेशको संघारमा उभिएको बेला कम्प्युटरको उपयोग बढ्नु आश्चर्यजनक होइन । सन् १९९० देखि विश्व सञ्चार क्षेत्रमा खुट्टा घुमाउन सफल इन्टरनेट प्रणाली नेपालमा प्रवेश गरेको दुई–तीन
वर्षमै चितवनमा पनि यो सञ्जाल भित्रिएको छ ।’
यो सुन्दा सामाजिक सञ्जालहरुको जञ्जालमा जेलिएर हुर्किंदै गरेको अहिलेको इन्टरनेटप्रेमी पुस्तालाई हाँसो उठ्छ होला, तर चितवनको सन्दर्भमा त्यसबेलाको साह्रै सनसनीपूर्ण र चाखलाग्दो खोजी समाचार थियो त्यो । त्यसबेला चितवनमा इन्टरनेट भित्रिएको समाचार सोधीखोजी गरेर लेख्ने सूचनाप्रविधिमा पोख्त पत्रकार थिए भाष्कर शर्मा । होष्टेमा हैंसे गर्दै सूचना संकलनमा उनलाई सघाउन पत्रिकाका व्यवस्थापक जीवलाल पौडेल जुटेका थिए भने समाचारमा गल्ती नहोस् भन्नका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रमाणलीका जानकार रामु अधिकारीको योग्यतालाई पनि रिपोर्टिङमा उपयोग गरिएको थियो ।
करिब एक वर्ष अघि पत्रिका साप्ताहिक छँदादेखि समाचार लेख्न सिक्दासिक्दै यस अखबारको पूर्णकालीन सम्वाददाता भइखाएको म आफ्नै पत्रिकामा छापिएको इन्टरनेटसम्बन्धी समाचार पढेर जिल्ल परेको थिएँ नबुझेर । चितवनमा इन्टरनेटको जालो फिंजियो भन्ने समाचारको शीर्षक नै मलाई अलमल्याउन काफी थियो । त्यसबेला अखबार पढ्ने अधिकांश पाठकहरु सूचना र प्रविधिमा मजस्तै मठ्ठ थिए । समाचार सबैले नबुझ्लान् भनेर होला आमुख पछिको अनुच्छेदमा चाहिँ कम्प्युटर र इन्टरनेट के हो भन्नेबारे खुलाइएको थियो ।
अहिले आएर जस्ताको तस्तै पढ्दा लाग्छ त्यसबेला हामी इन्टरनेटको कखरा सिक्न योग्य बन्दै थियौँ । समाचार यसरी अघि बढेको रहेछ, ‘इन्टरनेट एक यस्तो प्रणाली हो जहाँबाट चाहेको सूचना हेर्न तथा पढ्न सकिन्छ । होष्ट कम्प्युटरको परिकल्पना सन् १९६९ मा गरिएको भए पनि इमेल÷इन्टरनेटको सुरूआत सन् १९९० मा मात्रै भएको हो । इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसेर जुनसुकै क्षेत्रको कुनै पनि सूचना हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।’
१४ वर्ष पहिले छापिएको त्यो समाचार अहिले पढ्दा असाध्यै चाख लाग्दा ऐतिहासिक सूचनाहरु पनि फेला परे । ती जानकारीहरु सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा रूचि राख्ने चितवनवासीहरुलाई पछिसम्मका लागि पनि घतलाग्दो बनिरहन सक्छन्, जस्तो कि त्यसबेला इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या । अक्सफोर्ड कम्प्युटर इन्टरनेशनल प्रा.लि. नाम गरेको व्यावसायिक कम्पनीले चितवनमा पहिलो पटक इन्टरनेट सेवा भित्र्याएको रहेछ । उसले इन्टरनेट चलाउने ग्राहकको संख्या २५ पु¥याइसकेको सूचनाले समाचारलाई बडो ओजनदार बनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालक एवम् कम्प्युटर इञ्जिनियर हरि भण्डारीलाई उदृत गर्दै समाचारमा अझ दमदार सूचना सामेल गराइएको छ, ‘उहाँ चाँडै नै ग्राहक वृद्धि हुने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ ।’ यसको मतलब चितवनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २५ नाघ्ने सम्भावनाले नै आशावादी बनाउने जमाना रहेछ त्यो । अहिलेको किशोर पुस्तालाई त उखान सुनाएजस्तो लाग्दो हो यो कुरा । हामीले देखेभोगेको परिवर्तन न अघिल्लो पुस्ताले अनुभव गर्न पायो न त पछिल्लो पुस्ताले नै अनुभूति गर्न भ्यायो । यसअर्थमा हाम्रो समकालीन पुस्ता अद्वितीय र भाग्यमानी रह्यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा उलटपुलट हुँदाको संक्रमणकालीन साक्षी बनेर ।
पत्रिकाको त्यो पुरानो पातोमा चितवनमा इमेल र इन्टरनेटको उपयोगबारे अरु पनि चाखलाग्दा खुराकहरु छन् । सन् १९९९ को अगष्ट १० तारिखका दिन छापिएको त्यो समाचारअनुसार त्यसै वर्षको जनवरी अर्थात् आठ महिनाअघि स्थापना भएको मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्रा.लि.ले जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न झन् बढी योगदान पु¥याएको रहेछ । उसले इन्टरनेटका ६६ र इमेलका १९ ग्राहक बनाइसकेको तथ्य कम्पनीका साझेदार दीपेन्द्र बज्राचार्यले खुलासा गरेका छन् ।
समाचारमा उनैलाई उदृत गर्दै लेखिएअनुसार त्यसबेला सूचनाप्रविधिको सेवा पु¥याउने व्यापारिक केन्द्रहरु नै बढी संख्यामा इमेल र इन्टरनेटका ग्राहक रहेछन् । त्यसपछि विदेशी दाताहरुद्वारा सञ्चालित महङ्गा परियोजनाले सेवा खपत गरेका रहेछन् भने व्यक्तिगत कामका लागि महङ्गो इमेल÷इन्टरनेट सेवा खरिद गर्न सक्ने हैसियत भएका ग्राहक पनि फाटफुट मात्रामा देखा पर्न थालेका रहेछन् । त्यस हिसाबले दुवै कम्पनी अन्तर्गतका ग्राहक जोड्दा एक सयको हाराहारीमा पुगेको देखिन्थ्यो ।
इन्टरनेट सेवा जडान गर्न सजिलो पनि थिएन । त्यसका लागि कम्प्युटर, मोडेम डिभाइस र टेलिफोन लाइन नभई हुँदैनथ्यो । टेलिफोन लाइन भन्नेबित्तिकै कहाँ पाइन्थ्यो र ! साधारण प्रतिक्षासूचीबाट टेलिफोन जोड्न निवेदन हालेको एक÷डेढ दशकसम्म कुर्नुपथ्र्यो । बढी पैसा तिरेर तुरून्त जोड्न सकिने ओवाइटी टेलिफोन सुविधालाई उतिबेलाको पैसा नै बीस÷बाइस हजार पथ्र्यो । त्यो पनि सिमित क्षमताको कारण तत्कलीन दूरसञ्चार संस्थानले जसलाई चाहियो उसलाई बाँड्न सक्दैनथ्यो ।
एक थान टेलिफोन जोड्न सञ्चारमन्त्रीदेखि संस्थानका पियनसम्मलाई ‘खुशी’ पार्नुपथ्र्यो । त्यो बेलाको परिवेश अहिले आएर सम्झँदा पो अचम्म लाग्छ । ऊबेला कम्प्युटर पनि अहिले जस्तो पसलमा तुरून्तै किन्न पाइनेगरी सजाएर बेच्न राखिएको हुँदैनथ्यो । काठमाण्डौँका बिक्रेतामार्फत् विदेशबाट मगाएर पालो पर्खीकन पैसा तिरेपछि मात्र चितवनसम्म आइपुग्थ्यो । तिनै इमेल÷इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कम्प्युटरको बिक्री र मर्मत सेवा
पनि दिन्थे ।
कसैले कम्प्युटर किनिहालेमा टोलछिमेक र नातागोतासम्म खबर प्रवाह हुन्थ्यो । कम्प्युटरधनीकहाँ मौका मिलाएर कम्प्युटर हेर्न धाउने चिनजानका साथी र आफन्तजनहरुको धुइरो नै लाग्दथ्यो । त्यस्तो स्थितिमा कम्प्युटर र टेलिफोनको अनुपलब्धतासँगै ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता पनि कम हुनु अस्वाभाविक थिएन । अनि इमेल र इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताहरु बढून् कसरी ?
उपभोक्ताले इमेल÷इन्टरनेट चलाएवापत् बुझाउनुपर्ने शुल्क त्यो समाचार लेखिएताका प्रतिमिनेट ९९ पैसादेखि ३ रूपैयाँसम्म पर्दोरहेछ । यस हिसाबले एक घण्टाको ६० देखि १ सय ८० रूपैयाँसम्म पर्ने भयो । त्यो पनि दुई महिनाअघि ७० प्रतिशतले घटेपछि कायम भएको शुल्क थियो । नवोदित पुस्ताका नानीबाबुहरुले कल्पना गरुन्, उनीहरु त्यतिवेला किशोरावस्थामा पुगेका भए समय बिताउन इन्टरनेट रोज्थे होला कि वात मार्ने साथी खोज्थे होला ?
अब उही पुरानो समाचारकालीन सयमको चालचलनबारे अलिकति आफ्ना अनुभूतिहरु राख्छु । इन्टरनेट सेवा चितवनमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अखबारको पहुँचमा आइसकेको
थिएन । देशविदेशका समाचार आफ्नै आँखा अगाडिको कम्प्युटरमा पढ्न सकिन्छ रे भनेको सुन्दा आश्चर्य लाग्थ्यो । पत्रिका दैनिक भएको पाँच–छ महिनापछि मात्र हामी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बुलेटिनको ग्राहक बन्यौँ । काठमाण्डौँमा तयार हुने रासस बुलेटिन कम्प्युटरमा जडित मोडेमको सहायताले टेलिफोन नम्बर डायल गरेर तान्ने गरिन्थ्यो तर त्यो इन्टरनेट नभई नेटवर्क सेवा मात्र थियो ।
त्यसबेला स्थानीय समाचारहरु बटुल्ने र लेख्ने काममा रामकुमार एलन, सुमन गैरे र म थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, विज्ञान÷प्रविधि, कला र मनोरञ्जनजस्ता विविध स्वादका खुराक तयार पार्नमा प्रकाश अर्याल र भाष्कर शर्माको मेहनत लगानी हुन्थ्यो । साथी सूर्यप्रकाश कँडेलको वरिष्ठता उपसम्पादन र लेखा व्यवस्थापनमा बाँडिएको
हुन्थ्यो । प्रकाशन प्रबन्ध र बजार व्यवस्थापनमा क्रमशः जीवराज अर्याल र जीवलाल पौडेलको जोशजाँगर आठै प्रहर जीवन्त हुन्थ्यो । हामी सबैको मियो बनेर सम्पादक÷प्रकाशक धर्मराज अर्यालले उसबेलादेखि कायम राख्नुभएको धीर नेतृत्व अहिलेसम्म उत्तिकै स्थिर छँदैछ ।
हाम्रो अखबार राष्ट्रिय समाचार समितिलाई मासिक शुल्क बुझाएर समाचार सेवाको ग्राहक बनेको दिन म औधी खुशी भएको थिएँ । किनभने साविकमा साइकल पेलेर वा पैताला खियाएर दिनभर नदौडिए साँझ पत्रिकाको पेज खाली हुन्थ्यो । पत्रिकाको पेज खाली हुनु भनेकै पत्रकारको पेट खाली हुनु थियो । त्यसकारण सादा पेज भर्नै भए पनि अक्षरको खेती गर्नैपथ्र्यो । खाली पेजका पत्रिका पाठकहरुकहाँ पठाउन नमिल्ने भएर होला त्यसबेला हामीले जे लेख्यौँ त्यही नै समाचार बने । मानवीय रूचि र जनचासोबारे ख्याल राख्न नजान्दा सम्पादकका अगाडि ठिक्क देखिन पाठकका नजरमा दिक्क लाग्दा भएर पनि पोखियौँ होला अखबारका पानाहरुमा । त्यस्ता सबै कसुरहरुका लागि समस्त ज्ञात÷अज्ञात पाठकज्यूहरुबाट क्षमा माग्छु आज ।